Caruurta Kismaayo oo halis ugu jira Cuduro khatar ah | Shabakada Alshahid
Added by Webmaster on November 11, 2012.
Saved under Muuji, Qoyska & Caruurta, Warar, Warbixin
Kismaayo (Alshahid)- Xafiiska Isku-duwista arrimaha Bani’aadaminimada u qaabilsan Qaramada Midoobay ee loo yaqaan OCHA ayaa Warbixin uu soo saaray ku sheegay in ku dhawaad 135000 (Boqol iyo Sodon iyo Shan Kun) oo Caruu Soomaaliyeed ah ay halis ugu jiraan Cudurka Pooliyada loo yaqaan ama Shubanka, Caruurtanina waxay ku suganyihiin magaalada Kismaayo.
Xarakada Alshabab ayaa Saddex Sano ka hor waxay magaalada Kismaayo iyo qaybo kale oo dalka ka mida ka mamnuucday howlo Caafimaad oo looga hortagayay Cudurka Shuban Biyoodka. Waxayna taas horseeday inuu Cudurku awood ballaaran ku yeesho deegaanadaas.
Warbixintii u dambeysay ee kasoo baxday Xafiiska OCHA ayaa lagu sheegay in mamnuucista Gargaarka Caafimaad ee looga hortagayo Cudurka Shubanka uu sababay inay xoogeysato suurtagalnimada uu Cudurkaasi ugu faafi karo deegaanka.
Caruur badan oo markii Alshababku ay mamnuucistooda ku dhaqaaqeen ka dib dhalatay ayaa waxay seegeen fursadii lagu siin lahaa Dawooyinka ka hortagaya Shubanka, taas oo keentay inay halis u galaan Cudurkaas.
rrimo walwal abuuraya ay jiraan waqtigan, kuwaas oo ay ku jiraan suurtagalnimada inuu faafo Cudurka Booliyada, maadaama
Ururada Gargaarka ayaa sheegay inay u diyaar garoobayaan olole quudin ah oo loo samaynayo 135000 oo caruur ah, kuwaas oo ku nool deegaanada Jubooyinka ee Somalia.
Mas’uuliyiin hay’adahaas ka tirsanna waxay u sheegeen Wakaaladda IRIN ee Wararka Bani’aadaminimada u qaabilsan Qaramada Midoobay in dhawaan Kaniiniyo iyo Dawooyin kale la siin doono Caruurtaas hadii ay fududaato tagista goobaha Koofurta iyo Bartamaha Somalia ku yaala.
Mas’uul dhanka Xiriirka dalalka Deeqaha Bixiya u qaabilsan Hay’adda Caafimaadka Aduunka oo lagu magacaabo Peter Disolver ayaa fariin Internetka uu ugusoo diray Wakaaladda IRIN wuxuu ku yidhi “ Hadii ay suurta gasho in deegaanada dhibaatada Caafimaad ay iminka ka jirto la tagi karo, waxaan rajaynaynaa inaan awoodi doonno quudinta 800000 oo Caruur dheeraad ah, kuwaas oo da’doodu ay ka yartahay 5 Sano. Waxayna kuwanina ka mid yihiin kuwa aan Saddexdii Sano ee tagtay wax Quudin ah helin”